Uyinika njani imifanekiso yakho kwi-Instagram? Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyinika njani imifanekiso yakho kwi-Instagram
UJorge Neira | | ngokubanzi, Imifanekiso
Iifoto zezi isiseko solwazi oluncinci malunga nomzuzwana, useto okanye indawo. Kucingelwa ukuba ukusukela nge-1826 (Umhla ekukholelwa ukuba wawukho ithathe ifoto yokuqala kwihlabathi jikelele), Iikhamera zisivumele ukuba sifeze loo mizuzu ibaluleke kangaka ebomini bethu.
Kwangokunjalo, siyibonile indlela ezathi ekugqibeleni zavela ngayo iikhamera kule minyaka kwaye inokwenzeka namhlanje thatha umfanekiso onepesenti enkulu yeefowuni eziphathwayo, Ukuqonda ukuba yintoni kwixesha elidlulileyo elinokubandakanya umzamo omkhulu, namhlanje, yinto nje yokuchwetheza kancinci, ugxile kwaye ucofe ukhetho "Thatha ifoto".
1 Nika iifoto zakho isiphumo esidumileyo se-Instagram
2 Isihleli seFoto App
3 Umhleli woMgangatho weWix
4 Izixhobo eziyilo ezikwi-Intanethi
5 Adobe Photoshop
Nika iifoto zakho isiphumo esidumileyo se-Instagram
Ke, iifoto namhlanje zenza enye yeefayile ze- uninzi lwezinto ezizezinye ezenziweyo bubugcisa kuthi, ngendlela engathathi mzamo omkhulu ukuze ube nakho ukuthatha umfanekiso.
Kwangolo hlobo linye, kunokwenzeka fumana iiprojekthi zoyilo lwegraphic Ngaphandle kokuqala ugqibe uthotho lwezifundo okanye iikhosi zokulungiselela, into ethe yakhokelela kubantu abathi, ngenxa yokuthanda ukwazi okanye ngasizathu sithile, bakwazi ukufumana izixhobo eziyimfuneko ukuze bakwazi lungisa imifanekiso.
Ukusuka kweli nqaku lokugqibela, eli nqaku liza kufundisa ezinye iingcebiso ezifanelekileyo abanokubonelela ngayo ngomsebenzisi enye indlela yokusebenzisa isiphumo se-Instagram kwiifoto zakhe kwaye kubonakala ngathi esi siphumo sixatyiswe kakhulu kwihlabathi lokupeyinta.
Iziphumo ze-Instagram yile seti ye maleko bokuqonda ukuba sinokufaka isicelo kwiifoto zethu nje ukuba zibanjiwe kwaye sele sizifaka kwi-Instagram.
Ingxaki ivela xa siqonda ukuba akunakwenzeka ukuba usebenzise esi siphumo ngaphandle kweApp, eshiye abantu abaninzi benoluvo lokuba banokusebenzisa esi siphumo sinomtsalane kwiifoto zabo.
Ukuthuthuzela umfundi kunye nabo bonke abo batsha kwicandelo lokupapasha, kuya kubaluleka ukwazi ukuba kunokwenzeka ukuba ufumane Isiphumo se-instagram ngokusebenzisa isoftware yokuhlela imifanekiso, ngendlela enokuthi ifake isicelo kuyo yonke imifanekiso esiyifunayo.
Ngale ndlela, ezinye izinto ezithambileyo esinokuthi sizisebenzise ukufumana esi siphumo zezi:
Isihleli seFoto App
Abasebenzisi beWix, ukhetho loku Ifoto yomhleli App, lolunye lolona khetho luqhutywa kweli qonga. Ke, esi sicelo silula, ngendlela yokuba nabani na angasebenzisa esi sixhobo ukuhlela imifanekiso yabo.
Umhleli woMgangatho weWix
Iqonga leWix lisinika ifayile ye- isoftware yasimahla kunye necompact, esivumela ukuba sikhethe kwinani elikhulu lezinto ezinokukhethwa kwimifanekiso yethu, apho sinokuthi sikhethe iindidi ngeendidi kunye nemibala enokuthi ivelise umbono omkhulu kwiifoto zethu.
Izixhobo eziyilo ezikwi-Intanethi
Zininzi izixhobo esinokuthi namhlanje sizifumane kwiwebhu. Uyilo lolunye lolo khetho esinokulufumana ngobuninzi kwiwebhu, yiyo loo nto kusenokwenzeka ukuba senze iiprojekthi zemifanekiso ngaphandle kwesidingo sokukhuphela nasiphi na isoftware kwikhompyuter yethu. Ngale ndlela, umsebenzisi kufuneka akhethe phakathi kwe Inkqubo elungele ukhetho lwakho.
Este isoftware eyaziwayo ayikude ngasemva kwaye kukuba phakathi kwemisebenzi yayo emininzi, ukuhlela nokwenza iileya isivumela ukuba siqhubekeke nokuhlelwa kwemifanekiso yethu ukuya kuthi ga apho kunokwenzeka khona ukuvelisa umaleko esiwukhangelayo okanye isiphumo se-Instagram.
Kukho izixhobo ezininzi ezisivumela namhlanje ukuba sivelise esi siphumo, kunye nabanye maleko anokuba nomtsalane ngakumbi ingqokelela yethu yonke yemifanekiso yedijithali.
Ingaba ulunde ntoni? Phanda kwaye uvavanye izixhobo ezifanelekileyo iimfuno zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyinika njani imifanekiso yakho kwi-Instagram
Behance inethiwekhi enkulu yezentlalo yoyilo lweAdobe
Yila ipowusta ngokuchanekileyo ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi